Afọ nke Social Small Business | Martech Zone
Mgbe obula m nuru na mmadu amalite ahia ma obu ha nwere obere oru nke ha, ana m akwanyere ha ugwu ozugbo. Obere ulo oru mejuputara otutu netwok anyi gbasaa ma anyi nile na agbasi mbo ike izulita onwe anyi elu na oke gooliaths. M agbasaghị ịdabere na obere ulo oru ihe karịrị ebe ọ bụla ahịa bụ isi ahịa… ọ bụghị naanị a nkwa, ọ bụ eziokwu. Obere azụmaahịa na-atụgharị na netwọkụ mmekọrịta na-adabere na netwọkụ ha, chọta ndị ahịa ọhụụ, mụta banyere ụlọ ọrụ ha, nwewe ikike. LinkedIn bu ihe di nkpa banyere nkwa ndia.
Ihe LinkedIn hụrụ nwere ike iju gị anya: 94% nke ndị na-aza ajụjụ nyocha na-eji usoro mgbasa ozi kwuru na ha na-eji ya maka ahịa, na 3 n'ime 5 na-ekwu na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-edozi isi nsogbu azụmahịa nke na-adọta ndị ahịa ọhụrụ. Maka ụlọ ọrụ na-eto eto hyper, mgbasa ozi mmekọrịta dị mkpa karị. Ha tinye ego na mgbasa ozi mgbasa ozi karịa ọwa ọ bụla, ma kwenye na ọ dị oke irè na ịmezu ebumnuche ahịa dịka akara, ịre ahịa ọdịnaya, na ọgbọ ọgbọ.
Gị Microsite ohuru ohuru nke LinkedIn ịmụtakwu banyere otu LinkedIn nwere ike isi nyere gị aka iru ebumnuche azụmahịa gị pụrụ iche site na mgbasa ozi mmekọrịta.
Tags: LinkedInobere bizobere azụmahịaSMB
N'ezie, nkuzi na kediegwu post. Tinyela ọtụtụ ozi na blọọgụ gị. Daalụ maka
na-ekerịta ozi a bara uru.